Maka: okuqukethwe okubukwayo | Martech Zone
Maka: okuqukethwe okubukwayo
ULwesithathu, May 5, 2021 ULwesithathu, May 5, 2021 UNayomi Chibana
Sonke sizwile ukuthi isithombe sibiza amagama ayinkulungwane. Lokhu bekungeke kube yiqiniso namuhla njengoba sibona enye yezinguquko zokuxhumana ezijabulisa kunazo zonke - lapho izithombe ziqhubeka nokufaka amagama. Umuntu ojwayelekile ukhumbula ama-20% kuphela alokho abakufundayo kepha ama-80% alokho akubonayo. I-90% yemininingwane ethunyelwe ebuchosheni bethu iyabonakala. Kungakho okuqukethwe okubukwayo sekuyindlela eyodwa ebaluleke kakhulu yokwenza
NgeSonto, Okthoba 5, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lokhu kushicilelwa nomsebenzi omningi esiwenzela amaklayenti kubandakanya okuqukethwe okubukwayo. Kuyasebenza… izithameli zethu zikhule kakhulu ngokugxila kokuqukethwe okubukwayo futhi sisize namakhasimende ethu ukuthi akhule ukufinyelela kwawo ngokuqukethwe okubonakalayo okuyingxenye yenhlanganisela. Lokhu ku-infographic eyenziwe yiMakethe Domination Media ukukhombisa amandla wokuqukethwe okubukwayo. Akuyona imfihlo ukuthi abathengi baphendula kangcono ekukhangiseni okubukwayo, futhi lokhu kunjalo
Angiphikisani nakancane nokukhangisa nokukhokhela ukunyuswa, kepha abaninimabhizinisi abaningi ngisho nabathengisi abathile abawuhlukanisi umehluko. Imvamisa, ukumaketha komphakathi kubhekwa njengesinye nje isiteshi. Yize kuyisu elengeziwe ukwengeza ekumaketheni kwakho, ukunikezwa kwezenhlalo ithuba elihluke kakhulu. Imithombo yezokuxhumana ibilokhu iphazamisa indawo yezokukhangisa selokhu yaqhamuka endaweni yesehlakalo futhi yanikela ngamamethrikhi alandelanayo abakhangisi abaphupha ngawo kuphela. Ngefayela le-